के हो कम्मर दुख्ने समस्या ? यस्ता छन्, करण र घरेलू उपचार – Etajakhabar
के हो कम्मर दुख्ने समस्या ? यस्ता छन्, करण र घरेलू उपचार
ताजा खबर:- तपाईको घरमा यदि वृद्ध मानिसहरू छन् भने उनीहरू कयौँ पटक आफ्नो दुखाईको कारणले कराउएको सुन्नु भएकै होला । तपाईले जानकारी अति आवश्यक हुन्छ कि, यसमा सबैभन्दा भयानक र सामान्य दुखाई कम्मर दुख्ने समस्या हो । यस समस्यमा यो आवश्यक हुँदैन कि यो समस्या केवल वृद्ध मानिसहरूलाई मात्र हुन्छ तर वास्तवमा यो समस्या अब कुनै पनि उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुनसक्छ । यसकारण कम्मर दुख्ने समस्याले कुनै पनि उमेर समूहका मानिस प्रभावित हुनसक्छन् तर प्रायजसो बढ्दो उमेरका मानिस र महिलालाई यो समस्या बढी देखिन्छ । हाम्रो दिनचर्यामा आधुनिकरण यति बढी भैईसक्यो कि यूवा वर्ग पनि यसबाट अछूत छैनन् । यसबाट बँच्नका लागि आज यहाँ केही घरेलू उपायको बारेमा चर्चा गरिएको छ, जसले तपाईलाई यस समस्याबाट सहजै छुटकारा दिलाउँछ ।
कम्मर दुख्ने कारण
शरीरमा वजन बढ्नु- यदि हाम्रो शरीरको वजन अत्यधिक बढेको छ भने यो समस्या उत्पन्न भैइसकेको हुन्छ किनकि यसो हुँदा शरीरको वजन बढ्छ ।
मांशपेशी तन्किनु- कहिले-कहीँ हामी केही यस्ता कामकाजहरू बढी गर्ने गर्दछौँ, जुन नियमित रूपमा गर्नुहुँदैन । यदि हामी सधैँ हतारमा रहन्छौँ भने यस क्रममा कहिले-काहीँ हाम्रो मांशपेशी तन्किन्छ, जसको कारण कम्मरमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यो कम्मर दुख्ने कारण बन्न सक्छ ।
गलत तरिकाले सुत्नु- गलत तरिकाले सुत्दा पनि कम्मर दुख्ने एक कारण हो । कहिले-कहीँ सुत्ने यस्तो पोजिशन हुन्छ, जसमा हाम्रो शरीर उल्टो दिशामा हुन्छ । यसबाट कम्मर दुख्ने समस्या हुनसक्छ ।
गलत तरिकाले उठ्ने, झुक्ने र बस्ने- हामी दैनिक जीवनमा कसरी काम गर्छौँ, यो पनि यसमा निर्भर गर्छ । तपाई कसरी उठ्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ र झुक्नुहुन्छ । यी तीन क्रियामा लापरवाही गर्दा कम्मर दुख्ने कारण बन्न सक्छ ।
भारी वजन उठाउनु- यदि अधिकांश समय भारी वजन उठाउने कोशिश गरेमा कम्मर दुख्ने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यसकारण तपाईको क्षमता अनुसार मात्रा भारी वजन उठाउनु पर्दछ र कम्मर दुख्ने समस्याबाट बँच्न सकिन्छ ।
कम्मर दुख्ने समस्याको घरेलू उपाय-
तोरीको तेल र लसुन- तोरीको तेल र लसुन कम्मर दुख्ने समस्यालाई छुटकारा दिने प्रभावकारी घरेलू उपाय हो । तीन देखि पाँच चम्मच तेल र पाँच लसुनको पोटीलाई पकाउनुहोस् । यसलाई तबसम्म पकाउनुहोस् जबसम्म लसुनको पोटी कालो हुन्छ । अब यसलाई चिसो हुन दिनुहोस् । चिसो भएमा यसलाइ दुखाई महसूस हुने स्थानमा मालिश गर्नुहोस् । यसो गर्दा कम्मर दुख्ने समस्या कम हुँदै जान्छ ।
मनतातो पानीको सेकाई- यदि कम्मरमा तीव्र दुखाई रहेको छ भने यसको सेकाई मनतातो पानीले गर्नुपर्दछ । यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने कुनै बोतलमा तातो पानी भर्नुहोस् र आफ्नो कम्मरमा राख्नुहोस् । यसो गर्दा यस समस्याबाट आराम मिल्छ ।
यदि कम्मर दुख्ने समस्या कम भैरहेको छैन भने यसको लागि तातो र चिसोको मिश्रण गर्नुपर्दछ । वास्तवमा पहिले तपाई दुखाई भएको ठाउँमा मनतातो पानीले सेकाई गर्नुपर्दछ र पछि यस ठाउँमा बरफ लगाउनुपर्दछ ।
तातो नूनको सेकाई
तातो नूनको सेकाई पनि यसको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसको लागि नूनलाई तताउनुहोस् र यसलाई कुनै कपडा या तौलियामा लपेटेर सेकाई गर्नुहोस् । यसो गर्दा यस दुखाईबाट आराम मिल्छ ।
अजवायनको प्रयोग कम्मर दुख्ने समस्याका लागि निकै प्रभावकारी सावित हुन्छ । यदि तपाईलाई कम्मर दुख्ने समस्या रहेको छ भने अजवायनको सेवन गर्नुपर्दछ । यसलाई पहिले हल्का आँचमा पकाउनुहोस् र यो चिसो भैइसकेपछि सेवन गर्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २१, २०७४ समय: १:१५:५०